Myanmar Defence Weapons: ဘင်္ဂလားဒေ့်လေတပ် အမ်အိုင်ဂျီ-၂၉ အသစ်လား..။
chaung January 10, 2012 at 7:51 PM
များသောအားဖြင့် ၅စီးရီးတွေပဲ အတွေ့များရာက ခု၁၀၀ ဆိုတာအသစ်ဖြစ်မယ် ဖိန့်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် SE မော်ဒယ်ပဲ..http://www.defence.pk/forums/bangladesh-defence/126374-images-mig-29-mig-29-ub-fighters-bangladesh-air-force-7.html..
ီဝီကီကတော့ ဒီလိုရေးတယ် သူလဲ လိုက်ဝယ်နေပုံပဲ..BAF has an ongoing modernization program that includes plan to introduce 16 x F-7BG Air Guard aircraft for FOB at Cox's Bazar, one Squadron of MiG-29 and2state of the art Air Defence Radar within 2012
chaung January 10, 2012 at 7:57 PM
MM January 10, 2012 at 8:30 PM
ကျေးဇူးပါဘဲ ကိုchaungရေ... ဒီကောင်တွေအတော် ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာ အသိသာကြီးပါဗျာ... ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေထဲမှာ ခေတ်မှီဆုံးရေတပ်တည်ထောင်မည်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတွေကလည်း အခုထိကိုကိုင်ဆွဲထားတုန်းဘဲဗျ..။
Ne Linn Aung April 18, 2013 at 5:12 AM
Myanmar is also in the process of buying Su 30 from Russia. During his recent visit to Naypyitaw, Russian Defence Minister agreed to supply at least 24 Su 30s to Myanmar Air Force. Myanmar Parliament has already passedadefence budget that allow 1.4 bn $ for buying new weapons and armaments.